I-Glycvidone (glurenorm) ne-glipizide (minidiab) ekwelapheni isifo sikashukela > Imithi
I-Glycidone ne-glipizide - abamele izidakamizwa ezinciphisa ushukela eqenjini le-sulfonylurea. Ngabe i-glycidone noma i-glipizide isebenza kanjani futhi kuziphi izimo? Impendulo uzoyithola esihlokweni sanamuhla. Sanibonani bangani! Namuhla ngifuna ukuqeda ukukhuluma ngezidakamizwa zeqembu le-sulfonylurea, kepha hhayi ngezidakamizwa ezinciphisa ushukela ngokujwayelekile, ngoba kusenamaqembu ambalwa angahlanganiswa ukunakwa kwami.
Njengoba ukhumbula, sengibhale ngabameli abajwayelekile baleli qembu elikhulu kulezi zihloko "Diabeteson MV noma Gliclazide", "Glimepiride ekwelapheni isifo sikashukela sohlobo 2", nange-maninil esihlokweni esithi "Izidakamizwa ezokwehlisa ushukela empilweni yeziguli ezinesifo sikashukela," uma uma ungafundanga, ngiyacela.
IGlycvidone ne-glipizide akuzona izidakamizwa ezidumile zokwelapha isifo sikashukela ngokujwayelekile. Babhekwa njengezidakamizwa ezinomphumela ophansi wokunciphisa ushukela, yize inqubo yokusebenza kwe-glycidone ne-glipizide ifana nabalingani abanamandla kakhulu: i-mannil noma isifo sikashukela. Okusho ukuthi, baphinde bavuse amaseli we-pancreatic beta, athuthukisa ukugcinwa kwe-insulin. Zombili lezi zidakamizwa azivamile ukubekwa njenge-monotherapy, imvamisa njengengxenye yokwelashwa okuhlanganisa.
Kuliqiniso, amagama athi "glycidone", "glipizide" awahambisani nomhlaba wonke, futhi ekhemisi ungawathola ngaphansi kwamanye amagama okuhweba asekhona.
Glycvidone = Glenrenorm
IGlycvidone ivame ukutholakala ngaphansi kwegama iGlyurenorm, kepha ungathola isidakamizwa esinegama elifanayo lamazwe jikelele. Kutholakala kumathebulethi ku-30 ​​mg. Umthamo wokuqala yi-1/2 ithebhulethi ngosuku, khona-ke umthamo kanye / noma imvamisa yokuphatha uyakhuphuka kancane kancane. Umthamo omkhulu we-glurenorm ngamathebulethi ama-4 ngosuku (120 mg / ngosuku). Umuthi uthathwa imizuzu engama-30 ngaphambi kokudla, ukuwuvumela ukuthi udonse futhi unwebe umphumela wawo. Inani eliphakeme lesenzo livela ekuphakameni kokufakwa kokudla - ngemuva kwamahora angu-1.5-2, ubude besikhathi sokusebenza bungamahora angama-8-10.
Isici esiyingqayizivele se-glycidone ukuthi icishe ikhiqize ngokuphelele esibindini futhi idluliwe emathunjini. Ngokwezinso, yi-5% kuphela yezidakamizwa eyekelwayo, evumela iziguli ezihluleka ukwehluleka ukusisebenzisa ngokungesabi.
Njengoba umuthi unomphumela obuthakathaka kunalokho, ungasetshenziswa ezigabeni zokuqala zokwelashwa kwesifo sikashukela kwiziguli ngaphandle kwesisindo ngokweqile, lapho izinga likashukela wegazi aliphezulu kakhulu. Uma i-glurenorm ingasebenzi, kunqunywe esinye isidakamizwa esivela kuleli qembu, noma sishintshwe umuthi ovela kwelinye iqembu.
Njengazo zonke izidakamizwa ezinciphisa ushukela, i-glycidone ine-contraindication efanayo:
ketoacidosis noma ketoacidotic coma
I-hypoglycemia (ushukela wegazi ophansi)
I-Glipizide = minidiab
Ungathola i-glipizide kumakhemisi ngaphansi kwegama "minidiab" noma "glibenesis." Ithebhulethi ngokwayo ikhethekile. Leli yithebhulethi enokukhululwa okulawulwa kwento esebenzayo, isb. Into esebenzayo - i-glibenesis, idedelwa kancane kancane, idlula emgudwini wamathumbu omude, ngaleyo ndlela inikeze ukwehla ushukela wegazi nomphumela omude. Umphumela ofanayo uyabonakala ku-mellitus yesifo sikashukela.
I-Glipizide itholakala kumathebulethi ayi-5 mg. Iqala ukusebenza ngemuva kwemizuzu eyi-15-30, ngakho-ke kubalulekile ukuyithatha imizuzu eyi-15-30 ngaphambi kokudla. Umphumela omkhulu ungemva kwamahora ayi-1.5-2, uhlala egazini amahora angama-20. Umphumela ulinganiselwa emahoreni ama-2 ngemuva kokudla nemitha yeglucose yasekhaya.
Qala ukuthatha ama-5 mg ngosuku, kancane kancane ukhuphuka ngokuya ngezinga le-glycemia. Umthamo omkhulu wansuku zonke ufike ku-40 mg. Umthamo wansuku zonke ungahlukaniswa ngemithamo engu-2-3.
I-Contraindication kanye nemiphumela emibi ifana naleyo ye-glycidone (glurenorm).
Njengoba sengishilo, le mishanguzo isebenza ngempumelelo kakhulu ngokuhlangana nezinye izidakamizwa ze-antipyretic ezivela kwamanye amaqembu. Isibonelo, yinhle nge-metformin, umthamo wayo onqunywa ngudokotela, kanye ne-thiosalidinedione (i-actos, avandium) noma i-insulin.
Ngokuvamile, lokhu kuphela engangifuna ukukusho nge-glycidone ne-glipizide. Ngalo lwazi, ungalinganisa ukusebenza komuthi osetshenzisiwe futhi, uma ungaphumeleli, uwushintshe umuthi onamandla. Ngokweqiniso, kwakuqabukela ngingaziniki le mishanguzo, imvamisa ngandlela-thile isifo sikashukela.
Kepha ezifundeni ezihlukene ngokudiliva ngezindlela ezihlukile, ngakho-ke kungenzeka ukuthi ngaphezu kwazo awunalutho olungeziwe ukuqoka udokotela. Kuyenzeka ukuthi lesi sidakamizwa sikulingana kahle futhi izinga likashukela wegazi lizinzile, ngakho-ke akufanele ubheke okuhle kokuhle, kepha ngokuthula uthathe le mishanguzo.
Ngale ndlela, ngikhohlwe ngokuphelele ukushiya isixhumanisi esihlokweni semithi yakamuva yesifo sikashukela kulabo abangakafundi futhi okuye kwaba okokuqala kubhulogi. Le ndatshana ithi "Isiqondisi Esethembisayo Ekwelashweni Sikashukela."
Uyithanda kanjani le ndatshana? Ngizojabula kakhulu uma uyihlanganyela nabangane bakho ngezinsizakalo zenhlalo. amanethiwekhi ukuze labo abadinga usizo, njengawe, bathole imininingwane ebalulekile kuphela ngesifo sikashukela. Ukuze kube lula kuwe, ngaphansi kwendatshana kukhona izinkinobho zamanethiwekhi omphakathi adumile. amanethiwekhi ezwe lapho kungenzeka ukuthi ubhalisile kakade.
I-Glipizide - i-ejenti yomlomo ye-hypoglycemic, ibhekisela kokutholwa kwesulfonylurea kwesizukulwane se-II. Ishukumisa ukukhululeka kwe-insulin ngama-beta-endocrinocyte wepancreas, kwandisa ukukhishwa kwe-insulin.
Kwandisa ukuzwela kwezicubu kwe-insulin. Ine-hypolipidemic, izakhiwo ze-fibrinolytic, zivimbela ukuhlanganiswa kweplatelet. Isenzo siqala imizuzu eyi-10-30 ngemuva kokuthatha umuthi.
Thayipha isifo sikashukela sohlobo 2 (ngokungasebenzi kahle kwezindlela zokudla).
Umthamo ubekwa ngawodwana ngokuya ngesithombe somtholampilo sesi sifo. Umthamo wokuqala wansuku zonke ngu-2,5-5 mg. Umthamo owodwa omkhulu ngu-15 mg. Umthamo omkhulu wansuku zonke ngu-45 mg. Imvamisa yokuphatha ingu-2-4 r / usuku imizuzu engama-30 ngaphambi kokudla.
Lapho unquma i-glipizide ngemuva kokusetshenziswa kwe-insulin noma amanye ama-hypoglycemic agents, ukubanjwa ngokushesha kwe-glipizide egazini kufanele kucatshangwe futhi umthamo kufanele ulawulwe ngokuya ngezinga le-glycemia 2-4 r / ngosuku ngezinsuku zokuqala ezingama-4-5. Ngokuthuthukiswa kwe-hypoglycemia, uma isiguli sazi, ushukela (noma isisombululo sikashukela) unqunywe ngaphakathi.
Uma kwenzeka ulahlekelwe ukwazi, i-intravenous glucose noma i-glucagon sc, i-intramuscularly noma i-intravenous iyabhalwa. Ngemuva kokuthola ukwazi kabusha, kuyadingeka ukunikeza isiguli ukudla okucebile kuma-carbohydrate ukuze ugweme ukwakhiwa kabusha kwe-hypoglycemia. Ngokulimala, izifo ezinzima, ukungenelela okubanzi kokuhlinzwa, isiguli kufanele sidluliselwe ekusebenziseni i-insulin.
- Akuvamile - i-hypoglycemia (ikakhulukazi esegugile, iziguli ezibuthakathaka, ngokudla okungajwayelekile kokudla, ukuphuza utshwala, ukungasebenzi kahle kwesibindi kanye nezinso), izimpawu ze-dyspeptic, ikhanda elinyamalala nokulungiswa komthamo.
- Ama-letlalo wesikhumba awavami ukwenzeka, abe nomlingiswa okwethusayo, ukuhoxiswa kwezidakamizwa akudingeki.
- Akuvamile - i-hematopoiesis.
Imininingwane ejwayelekile mayelana nalokhu
Ingxenye le yi-ejenti yokwenziwa kwe-hypoglycemic.
I-Glipizide ayikwazi ukuncibilika emanzini noma kotshwala, noma kunjalo, isixazululo se-NaOH (i-0,1 mol / L okuhlushwa) ne-dimethylformamide ichaza lesi sakhi kahle. Le nto ikhiqizwa kumathebhulethi ajwayelekile kanye namaphilisi wokukhishwa aqhubekayo.
Lapho into ingena emzimbeni wesifo sikashukela, kugqugquzela ukukhishwa kwe-insulin kusuka ekusebenzeni kwamaseli we-beta we-islet Apparatus.
I-Glipizide isebenza kanjena:
Yehlisa ushukela kanye ne-glycosylated hemoglobin esiswini esingenalutho.
Kwandisa ukubekezelelwa kwe-glucose, futhi futhi ngezinga elincane - imvume ye-fluid ekhululekile.
Yehlisa amathuba okuba ne-hyperglycemia ngemuva kokudla.
Isithako esisebenzayo asithinti i-lipid metabolism. Ukusebenza kwawo kuqala ngemuva kwemizuzu engama-30 yokwamukelwa futhi kuyaqhubeka usuku lonke. Ukuqoqeka okuphezulu kwento kubonwa ngemuva kwamahora ama-1-3 wokusetshenziswa komlomo.
Kufanele kuqashelwe ukuthi i-Glipizide kungcono ukungayisebenzisi ngesikhathi sokudla, ngoba ukumunca ngokuphelele kuyancipha. I-biotransformation yento yenzeka esibindini.
Ingxenye leyo ivezwa njenge-metabolite kanye nezindunduma kanye nomchamo, kufaka phakathi okungashintshiwe - cishe i-10%.
Ngaphambi kokusebenzisa amalungiselelo aqukethe i-glipizide, udinga ukubonana nodokotela noma i-endocrinologist. Udokotela kuphela ongabheka ngokufanelekile ukufaneleka kokusebenzisa ithuluzi elithile.
Ngemuva kokuthenga umuthi, udinga ukufunda ngokucophelela ipheshana lokufundisa. Umthamo wokuqala ngu-5 mg, okhishwa kanye ngosuku ngaphambi noma ngemuva kokudla. Ngokuhamba kwesikhathi, ngokuba nenempilo evamile yesifo sikashukela, umthamo ungakhuphuka kancane kancane ufike ku-15 mg, uhlukanise ukuphathwa komuthi kaningana.
Imiyalo ithi uma umuthi uphuthelwe, kepha sekudlule amahora ambalwa seluthathiwe umuthi ofanele, umuthi kufanele uphathwe ngokushesha. Kepha uma cishe usuku seludlulile, kufanele ulandele irejimeni ejwayelekile yokwelashwa.
Iziguli zokuguga kanye nokuhlushwa i-pathology yesibindi kufanele zisebenzise umuthi emithanjeni ephansi - i-2,5 mg ngosuku, namaphilisi akhululwa isikhathi eside - kusuka ku-5 kuye ku-10 mg kanye, mhlawumbe ekuseni.
Njengayo yonke eminye imishanguzo, iGlipizide kufanele igcinwe kude nezingane ngaphambi kokuvikelwa umswakama egumbini lokushisa.
Contraindication kanye nomonakalo ongaba khona
Ezinye izigaba zabanesifo sikashukela azikwazi ukuthatha leli khambi.
Imiyalo enamathiselwe ine-contraindication ehlobene nokuzwela komuntu ngamunye entweni, isifo sikashukela, uhlobo oluncike ku-insulin sikashukela, iketoacidosis, umkhuhlane, ukuhlinzwa kwamuva, ukukhulelwa nesikhathi sokuncelisa ibele.
Ezimweni ezinzima kakhulu, ukusetshenziswa kwe-Glipizide kungenzeka ngesikhathi sokubeletha kwengane. Kepha ukusetshenziswa kwayo kuzodingeka kukhanseliwe ngenyanga eyi-1 ngaphambi kokuzalwa okulindelekile.
Ngesikhathi sokuncelisa, ukuphuza umuthi akuvunyelwe ngokuphelele.
Ukubonisana nodokotela ngaphambi kokusebenzisa i-Glipizide kuyadingeka, ngoba ukuphathwa kabi kwesidakamizwa kungaholela emiphumeleni eminingi engathandeki:
ikhanda, ukuqaqamba kokudideka, ukukhathala, ukuphefumula kwe-retinal, isiyezi, ukudangala, i-paresthesia, ukukhathazeka, ubuhlungu beso kanye ne-conjunctivitis,
ukuthatheka, isicanucanu, ukugabha, ukungcola kwegazi ezinduneni, ukuqunjelwa, i-dyspepsia ne-anorexia,
ukuluma, imivimbo kanye namakhuba,
i-pharyngitis, i-rhinitis ne-dyspnea,
ezihambisana nesistimu yenhliziyo nokwakheka kwegazi: i-arrhythmia, syncope, umuzwa wokukhanya okushisayo nomfutho wegazi ophezulu,
futhi i-glycemia yohlobo 2 sikashukela mellitus kuze kufike ku-glycemic coma.
okuhlobene nohlelo lwe-genitourinary: ukuncipha kwesifiso sobulili kanye ne-dysuria.
Ngaphezu kwalokho, kuneminye imiphumela emibi engase yenzeke - ukuquleka, ukoma okungacimekiyo, i-myalgia, i-arthralgia, ukujuluka, ukuqaqamba komzimba.
Izindleko, ukubuyekezwa kanye nama-analogues
Njengoba i-glipizide iyisakhi esisebenzayo, izidakamizwa eziningi eziqukethe into enjalo zingatholakala emakethe yemithi yaseRussia. Isibonelo, iGlucotrol CL noGlibenez Retard. Kuya ngesimo sokukhishwa, intengo yesidakamizwa iGlucotrol CL isuka kuma-ruble angama-280 kuya kwangama-360, kanye noGlibenez Retard - kusuka kuma-ruble angama-80 kuye kwangama-300.
Ukubuyekezwa kwabashukela abaningi abathathe lelo khambi kuyanelisa. Kodwa-ke, abaningi baphawula ukuthi umphumela wokwelapha we-glipizide wehla ngokuhamba kwesikhathi, ngakho-ke uvame ukusetshenziswa lapho uhlangana neminye imishanguzo yesifo sikashukela. Phakathi kwezinzuzo zesidakamizwa kungahlukaniswa kalula kokusebenzisa kanye namanani athembekile wezidakamizwa aqukethe i-glipizide.
Esimweni lapho umuthi owodwa ungalungile ngenxa yokuphikisana noma ukusabela okungekuhle, udokotela unquma i-analogue. Le mithi ifaka phakathi:
Ngaphandle kwemvume kadokotela, ukuzelapha akusizi. Ukulungiselela okuqukethe i-glipizide kungaba nomthelela ongemuhle emzimbeni womuntu. Ngokusebenzisa umuthi ngendlela efanele, ungagcina izinga likashukela lijwayelekile futhi ususe nezimpawu zesifo sikashukela. Kepha futhi akufanele sikhohlwe ngokwelashwa okuzivocavoca sikashukela nokudla okufanele.
Kuvidiyo ekulesi sihloko, udokotela uzokhuluma ngezidakamizwa zesifo sikashukela.
Ishukumisa ukukhishwa kwe-insulin kusuka kumaseli we-beta asebenzayo asebenzayo. Yehlisa izinga le-hemoglobin ye-glycosylated kanye ne-glucose yokuzila ezigulini ezinezindlela ezilinganiselwe nezinobunzima be-mellitus engavikeli i-insulin. Yehlisa i-hyperglycemia yangemva kokudla, ikhulisa ukubekezelelwa kwe-glucose kanye nokucaciswa koketshezi lwamahhala (ngezinga elincane). Impendulo ye-insulinotropic iba ngaphakathi kwemizuzu engama-30 ngemuva kokuphathwa ngomlomo, ubude besikhathi sokuthathwa komthamo owodwa bufika emahoreni angama-24. Akusithinti iphrofayili ye-lipid ye-plasma yegazi.
Ekuhlolweni kwamagundane kanye namagundane ku-doses ephindwe izikhathi ezingama-75 kune-MPD, akukukhuthazi ukuthathwa kwe-carcinogenesis futhi akukuthinti ukuzala (amagundane). Ucwaningo olwenziwe ngamagciwane, futhi ku-vivo , azidalulanga izakhiwo ze-mutagenic.
Ifomu elisebenza ngokushesha lishelwa ngokushesha nangokuphelele. Ukudla akukuthinti ukumunyiswa ngokuphelele, kepha kwehlisa ijubane imizuzu engama-40. Cmax kunqunywa amahora angama-1-3 ngemuva komthamo owodwa. T1/2 amahora angama-2- 4. Emva kokuthatha ifomu ebamba kancane, kuvela egazini ngemuva kwamahora ama-2-3, Cmax Ifinyelelwa ngemuva kwamahora ayi-6 kuya ku-12. Ihlangana namaprotheni egazi nge-plasma ngo-98-99%. Umthamo wokusatshalaliswa ngemuva kokuphathwa kwe-iv ngu-11 L, isilinganiso T1/2 - Amahora ama-2-5. Inani eliphelele ngemuva komjovo owodwa we-iv ngu-3 l / h. Biotransformed esibindini (ngendinyana yokuqala - kancane). Ngaphansi kwe-10% kudalulwe kungashintshiwe emchameni nasezindundwini, cishe 90% kudalulwe ngendlela yama-metabolites ngomchamo (80%) nomgunjana (10%).
Imiphumela emibi yento i-Glipizide
Ngefomu elisebenzayo kancane le-glipizide:
Kusuka ohlelweni lwezinzwa nezitho zemizwa: isiyezi, ikhanda, ukuqwasha, ukozela, ukukhathazeka, ukudangala, ukudideka, ukuphazamiseka kwe-gait, i-paresthesia, i-hypersthesia, iveli phambi kwamehlo, izinhlungu zamehlo, i-conjunctivitis, i-retinal hemorrhage.
Kusuka ohlelweni lwezinhliziyo negazi (i-hematopoiesis, i-heestasis): i-syncope, i-arrhythmia, i-hypertension ye-arterial, umuzwa wokukhanya okushisayo.
Ngasohlangothini lwe-metabolism: hypoglycemia
Kusuka kumgudu wokugaya ukudla: i-anorexia, isicanucanu, ukugabha, umuzwa wobunzima esifundeni se-epigastric, i-dyspepsia, ukuqunjelwa, ukuhlanganiswa kwegazi esihlalweni.
Engxenyeni yesikhumba: i-rash, i-urticaria, ukulunywa.
Kusuka ohlelweni lokuphefumula: i-rhinitis, i-pharyngitis, i-dyspnea.
Kusuka ohlelweni lwezitho zofuzo: dysuria, yehlile i-libido.
Okunye: ukoma, ukuthuthumela, i-edema yodumo, izinhlungu ezingezona ezasendaweni yonke emzimbeni, i-arthralgia, i-myalgia, iminyakazo, ukujuluka.
Ngefomu elisebenza ngokushesha le-glipizide:
Kusuka ohlelweni lwezinzwa nezitho zemizwa: ikhanda, isiyezi, ukozela.
Kusuka ohlelweni lwezinhliziyo negazi (i-hematopoiesis, i-heestasis: i-leukopenia, i-agranulocytosis, i-thrombocytopenia, i-pancytopenia, i-hemolytic noma i-aplastic anemia.
Ngasohlangothini lwe-metabolism: isifo sikashukela i-insipidus, i-hyponatremia, isifo se-porphyrin.
Kusuka kumgudu wokugaya ukudla: isicanucanu, ukuhlanza, ubuhlungu be-epigastric, ukuqunjelwa, i-cholestatic hepatitis (ukubala okuphuzi kwesikhumba kanye ne-sclera, ukuqunjelwa kwesitulo nokubamnyama komchamo, izinhlungu kwi-hypochondrium efanelekile).
Engxenyeni yesikhumba: i-erythema, ukuqubuka nje kwe-maculopapular, i-urticaria, i-photosensitivity.
Okunye: ukukhuphuka kokuhlushwa kwe-LDH, i-alkaline phosphatase, i-bilirubin engaqondile.
Amaminerali nama-glucocorticoids, ama-amphetamines, ama-anticonvulsants (ama-hydantoin derivatives), ama-asparaginase, ama-baclofen, ama-calcium antagonists, i-carbonic anhydrase inhibitors (i-acetazolamide), i-chlortalidone, inzalo yokuvimbela inzalo ngomlomo, i-epinephrine, i-ethacinic acid, i-giurimide, i-thymoside izindlala, i-triamteren kanye nezinye izidakamizwa ezidala i-hyperglycemia. Ama-anabolic steroid nama-androgens akhulisa umsebenzi we-hypoglycemic. Ama-anticoagulants angafani, ama-NSAIDs, i-chloramphenicol, i-clofibrate, i-guanethidine, i-MAO inhibitors, i-probenecid, i-sulfonamides, i-rifampicin ikhulisa ukugcotshwa kwengxenye yamahhala egazini (ngenxa yokusuka kumaprotheni e-plasma) futhi kusheshiswe i-biotransformation. I-Ketonazole, i-miconazole, i-sulfinpyrazone block inactivation futhi yandise i-hypoglycemia. Ngokuphikisana nesizinda sotshwala, ukuthuthukiswa kwe-disulfiram-like syndrome (ubuhlungu besisu, isicanucanu, ukuhlanza, ikhanda) kungenzeka. Izidakamizwa ze-Antithyroid nezangu-myelotoxic zandisa amathuba okukhula kwe-agranulocytosis, owokugcina, ngaphezu kwalokho - i-thrombocytopenia.
Ukwelashwa: ukuhoxiswa kwezidakamizwa, ukuphuza i-glucose kanye / noma ushintsho ekudleni ngokuqapha okuphoqelekile kwe-glycemia, nge-hypoglycemia (i-coma, ukubanjwa kwamathambo) - ukulaliswa esibhedlela ngokushesha, ukuphathwa kwesixazululo sikashukela esingena-50% nge-infusion kanyekanye (iv. idrip) yesisombululo esingu-10% i-glucose ukuqinisekisa ukugxilwa kweglue glucose ngenhla ka-5.5 mmol / l, ukuqapha kwe-glycemia kuyadingeka ezinsukwini eziyi-1-2 ngemuva kokuba isiguli sishiya i-coma. I-Dialysis ayisebenzi.